FAHADISOANA TOMBANTOMBANA : Tantsambo nitsabo tena nasaina nandohalika avy eo notifirina
Mbola mitana ny sain’ny mpanara-baovao ilay raharaha nahafaty an’ilay tantsambo tao Brickaville, ny 7 janoary lasa teo, vokatry ny tifitra toa variraraka nahazo azy. Manomboka mazava ny raharaha amin’izao fotoana izao. 13 janvier 2021
Ny alin’ny talata 5 janoary, tokantrano iray tao amin’ny fokontany Ambatalonga Rn2, section Ambodiampaly no nisy nanafika. Trano izay voalaza fa an’i Marley. Ity farany izay mpandraharaha sady mpanao politika. Tsy tao an-trano ilay Marley tamin’ny fotoana nidiran’ireo jiolahy tao an-trano fa efa teny am-pitsoahana ireo olon-dratsy vao tonga izy. Nifanenjehana teny amin’ny lalam-pirenena faharoa iny ireo jiolahy, ka ny roa no voasambotra avy hatrany. Tafaporitsaka kosa ny efatra. Nitohy noho izany ny fanenjehana. Nilaza ilay Marley fa lehilahy iray lava mainty no anisan’ireo jiolahy nanafika ny tranony.
“Mpibaiko lava ireo zandary”
Vokany, sendra teo am-pihinanana sakafo hariva tao Brickaville an-tampon-tanàna i Massou Erneste, tantsambo 52 taona no nisy zandary niditra tao amin’ilay hotely, ka namoaka azy avy hatrany ary nampandohalika azy sy nampanao tanana ambony. Tsy nisy fitaovam-piadiana teny amin’i Massou Erneste saingy tifitra avy hatrany no nataon’ilay zandary iray ao Brickaville antsoina hoe Poignard. Mbola nendahina taminy ihany koa ny “passeport”, finday ary firavaka izay teny aminy. Nanamafy ny mponina ao Brickaville sy ny fianakavian’ny maty fa tsy misy idiran’io Massou io velively izany fanafihana tao amin’ny tranon’i Marley izany.
Ity Marley ity izay lazain’izy ireo ihany koa fa mpandraharaha sy mpanao politika akaiky ny solombavambahoakan’i Brickaville teo aloha ka efa “mpibaiko lava ireo zandary ao an-toerana”. Diso famaritana tanteraka anefa i Marley sy ireo zandary nanatanteraka ny iraka izay nampanaoviny, ka tany amin’ny olona tsy jiolahy no niantefan’ny vokatry ny tombantombana tsotra izao, hoy hatrany ny fijoroana vavolombelona. Namela mananotena iray sy kamboty telo mianadahy ity tantsambo namoy ny ainy ity. Ny volana oktobra lasa teo izy no tonga teto Madagasikara ary efa nikasa ny hiverina hiasa indray.
Hikarakara ny fahasalamany amin’ny alalan’ny fanorana no anton-diany tao Brickaville no izao tatry ny hetraketraky ny zandary iray izao. Ho an’ny kolonely kaomandin’ny vondron-tobim-pileovan’ny Zandarimarim-pirenena Atsinanana, Ranaivoarison Theodule dia tsy fialokalofan’ny jiolahy ny zandary, ka tsy maintsy hosokafana ny fanadihadiana ary hampiharina ny lalàna raha vao hita fa nisy tokoa ny fahadisoana teo amin’ ilay zandary. Zandary mahafehy ny fitaovana eo am-pelatanany no ilaina, hoy izy.
Nilaza tsy hanaiky mora ny fahafatesan’i Massou Erneste ny zanak’i Sainte-Marie
Tontosa ny alatsinainy 11 janoary lasa teo tao amin’ny Nosy Sainte-Marie ny fandevenana ny vantana mangatsiakan’ i Massou Erneste, 52 taona. Ity farany izay tantsambo miasa ao amin’ny orinasa Msc Madagasikara, maty noho ny tifitra nataona zandary iray teny amin’ny lalam-pirenena faharoa. Raha ny fanazavana voaray, dia nampandohalihana sy nampanaovina tanana ambony teo amin’ny sisin-dalan’ny lalam-pirenena faharoa iny ity lehilahy ity mialoha ny nitifirana azy.
Ny alakamisy 7 janoay lasa teo tamin’ny 8 ora alina no nisehoan’ izany tao Brickaville. Tranga izay natao teo imason’ny olona maro tao an-toerana. Ny tolakandron’ny alatsinainy 11 janoary io taorian’ny fandevenana, dia namory mpanao gazety teo anoloan’ny CRJS tao Toamasina ny fikambanan’ny terak’ i Sainte Marie, monina sy mipetraka ao Toamasina. Nampiaka-peo ireto zanaky ny distrikan’i Sainte-Marie ireto fa tsy jiolahy ny havan’ izy ireo fa olona manana asa ara-dalàna, ka tsy hanaiky ny fanaovan’ ilay zandary amboletra tsy nisy fanadihadiana fa avy hatrany dia famonoana no natao.
Raisinay ho vonoan’ olona niniana natao sy fandikan-dalàna velona eto amin’ny Firenena iny trangan-javatra iny, ka anaovanay antso amin’ny Filohan’ny Repoblika sy tompon’ andraikitra mahefa ara-pitsarana sy ny eo anivon’ny Zandarimariam-pirenena mba hanokafana ny fanadihadiana tsy mitanila amin’ izao raharaha izao ho fametrahana ny maha Firenena tandalàna an’ i Madagasikara, hoy hatrany izy ireo.
Voaantso teny amin’ny biraon’ny Polisy tetsy Tsaralalàna indray CLEMENCE RAHARINIRINA (1983) 5 mars 2021 Namoahana “Filazana Fikarohana” i Marco Randrianisa FIANTSOANA “ACTE ISOLÉS” (909) 2 mars 2021 Tsy hiara-dalana amin-dRavalomanana intsony ? FANAMBARAN’NY ANTOKO MFM (204) 2 mars 2021 Mikononkonona fanakorontanana ireo vehivavy RMDM ? HETSIKY NY VEHIVAVY 8 MARSA ANY DIEGO (110) 2 mars 2021 Jiolahy naman’i Del kely miisa fito voasambotra KIDNAPPING TAO AMBAKIRENY (105) 2 mars 2021 Voasoroka ny korontana nokasain’ ny RMDM hatao ANALAKELY - AMBOHIJATOVO (93) 2 mars 2021